Dastabej » अब आमाको दूध ‘मिल्क बैंक’ मा
अब आमाको दूध ‘मिल्क बैंक’ मा – Dastabej
अब आमाको दूध ‘मिल्क बैंक’ मा
काठमाडौँ — नवजात शिशुका लागि आमाको दूधमा हुने पोषक तत्त्वको तुलना अरू खानेकुरासँग हुँदैन । तर सबै मातृ–शिशुका लागि अवस्था सहज हुन्छ भन्ने छैन । कसैका शिशुले आमाको दूध नखाने, कसैको दूध नआउने र कतिपय आमाले खुवाउनै नसक्ने समस्या छन् । अब त्यसको निदानका लागि ‘मिल्क बैंक’ सञ्चालनमा आउने भएको छ । आमाहरूले दान गर्ने दूध सुरक्षित रूपमा राखेर शिशुलाई खुवाउन मिल्ने गरी थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा ‘ह्युमन मिल्क बैंक’ स्थापना गर्न लागिएको हो । अस्पतालकी निर्देशक डा. संगीता मिश्रका अनुसार तीन महिनाभित्र उक्त बैंक सञ्चालनमा आउनेछ । ‘मुलुकमा अझैसम्म ह्युमन मिल्क बैंक नहुनु धेरै दुःखद स्थिति हो । हामी अस्पतालमा स्थापना गर्दैछौं,’ उनले भनिन्, ‘मिल्क बैंकले आकस्मिक स्थितिमा शिशुहरूलाई आमाको दूध सुनिश्चित गर्नेछ ।’
विभिन्न मुलुकमा यस्ता बैंक नवजात शिशुलाई पोषण पुर्‍याउन र रोक्न सकिने खालको मृत्युलाई कम गर्न धेरै प्रभावकारी देखिएको छ । जन्मेदेखि ६ महिनाको हुन्जेलसम्म स्तनपान गराउँदा शिशु मृत्युदरलाई धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ । बिरामी शिशुलाई समयमै आमाको दूध दिँदा ज्यान जोगिने सम्भावना ६ गुणाले बढ्ने हुँदा मिल्क बैंकले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक योगदान गर्ने डा. मिश्रले बताइन् । अस्पतालले बैंक सञ्चालनका लागि तयारी सुरु गरिसकेको छ । डा. मिश्रले भनिन्, ‘ठाउँको छनोटलगायत काम भइसकेको छ । आगामी तीन महिनाभित्र मिल्क बैंक सञ्चालनमा आउने छ ।’ ६ महिनापछि सातै प्रदेशमा मिल्क बैंक स्थापनाका लागि पहल गर्नेसमेत उनले बताइन् ।
प्रसूति गृहमा स्थापना हुन लागेको मिल्क बैंकले दूध दान गर्ने आमाहरूको सबैभन्दा पहिला एचआईभी/एचबीएसजी/डब्लूबीआरएललगायत परीक्षण गर्नेछ । परीक्षणमा कुनै समस्या नदेखिए ब्रेस्ट मिल्क पम्पको माध्यमले आमाको दूध संकलन गरिन्छ । उक्त दूधको गुणस्तर ‘मिल्क एनलाइजर’ को माध्यमले सुनिश्चित गरिन्छ । त्यसरी संकलन गरिएको दूधमा कुनै रोगव्याधि नरहेको परीक्षणबाट सुनिश्चिततापछि पास्चराइजेसन गरेर एक सय मिलिलिटरको बोतलमा राखिन्छ । त्यसपछि माइनस २० डिग्री सेल्सियस तापक्रमको डिप फ्रिजरमा राखिने उक्त बोतल आमाको दूध नपाएका शिशुलाई उपलब्ध गराइनेछ । मिल्क बैंकमा दुई प्रकारका आमाले आफ्नो दूध दान गर्न सक्नेछन् । एकथरी स्वेच्छाले दान गर्न सक्नेछन् भने अर्काथरी ती आमा जसले आफ्नो बच्चालाई दूध चुसाउन सक्दैनन् वा जसको दूध शिशुले खाँदैनन् । यसबाट उनीहरूमा दूध खुवाउन नपाउँदा देखिने स्वास्थ्य समस्या पनि हट्ने डा. मिश्र बताउँछिन् ।
‘मिल्क बैंकले बच्चाहरूलाई स्तनपान गराउन आमालाई परामर्श सेवा पनि दिनेछ,’ उनले भनिन् । बैंकले सुरुमा अस्पतालको नवजात शिशु सघन कक्षमा भर्ना हुने र अस्पतालमा भर्ना भएका स्तनपान गराउन नसक्ने आमाका शिशुहरूलाई दूध उपलब्ध गराउने छ । पछि पर्याप्त हुँदै गए कुनै कारणवश आमाको दूध नपाएका ६ महिनासम्मका बालबालिकालाई समेत उपलब्ध गराउने योजना रहेको उनले सुनाइन् । ‘वर्षौंदेखि हामीले मिल्क बैंकका लागि आवाज उठाउँदै आएका थियौं । जे होस् धेरै ढिलो भए पनि स्थापना लागेको छ,’ कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक एवं वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. आरपी बिच्छाले भने, ‘नवजात शिशुका लागि आमाको दूधको कुनै विकल्प छैन । आफ्ना शिशुलाई स्तनपान गराउन नसकेका आमाहरूका लागि मिल्क बैंकले ठूलो गुन लगाउँछ ।’ नेपालका लागि मिल्क बैंक नौलो अवधारणा भए पनि छिमेकी मुलुक भारतमा करिब ५० वटा सञ्चालनमा छन् । विश्वभर करिब ६ सयभन्दा बढी मिल्क बैंक छन् । पहिलो पटक सन् १९०९ मा अस्ट्रियामा ह्युमन मिल्क बैंक खोलिएको थियो । ईकान्तिपुर
१८ श्रावण २०७८, सोमबार १३:०० प्रकाशित